Booliska Manchester ayaa damaanad ku sii daayay Ryan Giggs kadib markii lagu soo oogay… – Hagaag.com
Booliska Manchester ayaa damaanad ku sii daayay Ryan Giggs kadib markii lagu soo oogay…
Posted on 24 Abriil 2021 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Booliska Manchester iyo dacwad oogayaasha ayaa ku dhawaaqay Jimcihii in xiddigii hore ee Manchester United Ryan Giggs uu wajahay eedeymo xadgudub ah oo ka dhan ah laba haween ah.
Giggs, oo 47 jir ah, ayaa lagu soo oogay inuu gacan ka hadal kula kacay haweeney da ‘deedu lagu qiyaasay 30 jir iyo haweeney kale oo 20da jirta, sanadihii 2017 iyo 2020.
Laga bilaabo Jimcihii, Giggs wuxuu ahaa tababaraha Wales ee kubada cagta, laakiin Xiriirka Kubadda Cagta Qaranka ayaa sheegay ka dib markii lagu dhawaaqay eedeymaha in lagu beddeli doono Robert Page Tartanka Horyaalada Yurub ee 2020 xagaagan.
Bishii November ee la soo dhaafay, Giggs wuxuu seegay dhowr ciyaarood oo caalami ah ka dib eedeymo ku saabsan xadgudub, wuxuuna beeniyay eedeymahaas waqtigaas.
Booliska ayaa bayaan rasmi ah ku sheegay in ” (Giggs) lagu sii daayay damaanad isla markaana uu ka soo muuqan doono maxkamad ku taal magaalada Manchester 28-ka April.”
Giggs ayaa bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyay inuusan dambi lahayn, wuxuuna yiri, “Waxaan si buuxda u ixtiraamayaa habraaca sharciga, waxaan fahansanahay halista eedeymaha waxaana difaaci doonaa dambi la’aanteyda maxkamada horteeda, waxaana rajeynayaa in magaceyga laga waayo wax dambi ah.”
Xiriirka Kubadda Cagta ee Wales ayaa sheegay in ay kulmi doonaan si ay uga wada hadlaan saameynta horumaradani ay ku leeyihiin xulka qaranka.
Giggs ayaa u saftay 963 kulan muddo 23 sano ah naadiga Manchester United mudadii uu ciyaarayay, waana rikoor, waqtigaasi waxaa kooxda loo caleemo saaray Horyaalka Premier League 13 jeer iyo sidoo kale labo horyaal oo Champions League ah, taasoo ka dhigtay inuu ka mid noqdo halyeeyada kooxda weyn ee ka dhisan Ingriiska.
Wales ayuu sidoo kale matalay 64 jeer intii u dhaxeysay 1991 iyo 2007 wuxuuna macalin u soo noqday dalkiisa 2018.